Hopitalibe Toamasina Lehilahy iray matin'ny Coronavirus ?
Lehilahy iray afohizina amin’ny anarana hoe RB nonina tao Mangarivotra no re fa hoe maty tao amin’ny Hopitalibe Toamasina ny alatsinainy 18 mey lasa teo. Voalaza fa voan’ny “fièvre typhoïde” Ratompokolahy.
Nakana singa nanaovana fitiliana coronavirus anefa izy, ka voalaza fa efa nivaly ny fitiliana ary “positif”, saingy teo am-piandrasana izany izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao, raha ny vaovao niely nanomboka omaly hariva. Miely ny resaka fa somary nafenimpenina io satria hoentin’ny havany halevina any Antsirabe io olona io. Andrasana kosa anefa etsy ankilany ny fanamarinana ofisialy na fandisoana avy amin’ny manam-pahefana mahefa manoloana ity toe-javatra mampiahiahy ity. Raha toa mantsy ka tena voan’ny coronavirus tokoa izy, dia mety hisy ny fanapahan-kevitra mitovitovy ilay natao tamin’ilay maty vao andro vitsivitsy izay, fa tsy azon’ny fianankaviana kitikitihina sy halevina razana. Ny CHU Morafeno no foibe fitazomana ny mararin’ny covid-19 ao Toamasina ankoatra ny toerana manokana mahazaka olona 50 ao amin’ny Foyer Social Canada. Ity Olona maty ity kosa dia tao aminy Hopitalibe, ka efa tafiditra na “infecté” ihany koa izany ny ao amin’ny Hopitalibe amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao ofisialy moa, dia 124 ny voa tao Toamasina, 26 sitrana, 2 maty. Nitombo 25 ireo tsaboina ao amin’ny Hopitaly Ambatovy, raha 10 ny zoma teo. Tena mandravavara ny Coronavirus ao Toamasina.